XOG: Waa Kuwee 5-ta Xidig Ee Xili Ciyaareedkan Kubbad Bixinta Ugu Badan Ka Sameeyay Premier League? Miyay Kooxdaada Cidi Ugu Jirtaa? - GOOL24.NET
XOG: Waa Kuwee 5-ta Xidig Ee Xili Ciyaareedkan Kubbad Bixinta Ugu Badan Ka Sameeyay Premier League? Miyay Kooxdaada Cidi Ugu Jirtaa?
Kubbada cagta casriga ah waxaa quruxdeeda lagu qiimeeyaa kubbad bixinta iyo baas isku dhiibashada waxaana inta badan doorkan iska leh ciyaartoyda khadka dhexe inkasta oo ay sidoo kale jiraan ciyaartoy difaac ah ama weerar ah oo door fiican ka ciyaara in kooxdoodu ay kubbada si fiican u wareejiso.
Marka ay noqoto kubbada cagta Premier league waxaa jira saddex tababare oo kubbad qurux badan lagu amaano waxayna kala yihiin Pep Guardiola, Maurizio Sarri iyo Jurgen Klopp halka waqtigii uu Wenger joogay uu waqti badan ahaa macalinka kubbada quruxda badan looga danbeeyay.
Haddaba xili ciyaareedkan waa kuwee shanta ciyaartoy ee kubbad bixinta ugu badan ka soo sameeyay Premier league?. Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xogan iyada oo aanu is dul taagi doono xidig kasta oo shantan ciyaartoy ka mid ahi waxa uu soo qabtay.
Haddaba halkan kaga bogo shanta ciyaartoy ee ilaa hadda xili ciyaareedkan kubbad bixinta ugu badan ka soo sameeyay horyaalka Premier league.
5- Granit Xhaka (Arsenal, Switzerland)
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka qaranka Switzerland ee Granit Xhaka ayaa kaalinta shanaad kaga jira shanta ciyaartoy ee xili ciyaareedkan baas bixinta ugu badan ka soo sameeyay horyaalka Premier league isaga oo soo ciyaaray dhamaan 12 kii kulan ee Premier League.
Xhaka ayaa 2 gool ka soo dhaliyay 12 kii kulan ee PRemier league isaga oo ugu dhawaan dhamaystirtay daqiiqadihii ugu badnaa ee kooxda Unai Emery halka uu 1 gool oo kaliya ka soo dhaliyay 38 kii kulan ee ka horeeyay.
Xhaka ayaa celcelis ahaan kulankii Premier league ah soo bixiyay 82 baas wuxuuna guud ahaan dhamaystiray 3116 kubbad bixin intii lagu jiray xili ciyaareedkii hore laakiin xili ciyaareedkan waxa uu Xhaka celcelis ahaan kulankiiba bixiyay 80.5 baas wuxuuna haddaba dhamaystiray 966 kubbad bixineed isaga oo waliba joogteeyay qaab ciyaareedkiisa xili ciyaareedkan.
Sidaa daraadeed, waxa uu Xhaka noqday xidiga shanaad ee xili ciyaareedkan dhamasytiray kubbad bixinta ugu badan ee kulamadii Premier league laga soo ciyaaray.
Halkan hoose ee bogga 2-aad ilaa 5-aad kaga bog xogta oo faah faahsan.